I-Sunshine Shack e-Clearwater Lake - I-Airbnb
I-Sunshine Shack e-Clearwater Lake
U-95% wezivakashi zakamuva unikeze u-Andrew & Christina izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
I-Sunshine Shack iyiNdawo yethu entsha. Inetimu emangalisayo futhi iyi-AirBNB eseduze kakhulu ne-Clearwater Lake ne-Bluff View Marina. Sibuze ngamagugu afihliwe endawo, ayizinto okumele uzigcine wena, umndeni wakho, izilwane ezifuywayo, nabangani nimatasatasa amaviki!
I-Sunshine Shack iyindawo yethu entsha futhi sijabule kakhulu manje ukwabelana ngayo nomphakathi we-AirBNB. I-Sunshine Shack ☀️ yamukela izivakashi ngetimu ye-Sunshine ekhanyayo nejabulisayo. Uzokwazi ukuthi useholidini okwesibili ungena emnyango. Umjondolo uyindawo eseduze ongayithola e-Clearwater Lake nase-Bluffview Marina/ State Park.
E-Bluffview uzothola ukuqashwa kwezikebhe, izinkundla zokudlala, nolwandle oluhle lokubhukuda esihlabathini. Sicela uqaphele ukuthi ukuqashwa kwezikebhe kugcwalisa ngokushesha ngakho uma ufuna ukuqasha sicela ushayele i-Marina ASAP. (Tshela u-Dave Andy noChristina abakuthumele) Ukwengeza, uma unentshisekelo singakuqondisa ekuqondeni kwezinye zezindlela zethu ezizithandayo zokuqwala izintaba, izimbobo zokubhukuda namagugu afihliwe endawo esijabulela ukuyisa izingane zethu, izinja, nabangane bethu kuye ngokuthi esikuso emoyeni. I-Piedmont inokuthile kwawo wonke umuntu!
Mayelana ne-Sunshine Shack:
Umjondolo wamakamelo amabili anompheme omuhle kakhulu ngaphambili, umgodi womlilo, igrill ye-BBQ, kanye ne-hammock ezokuhambisa ngokushesha kumodi "Yokuphumula" uma nje ungena. Indlu inekhishi elivuleke kakhulu futhi elikhulu elinamagumbi okulala amabili. Inkosi inombhede wosayizi wendlovukazi onethezekile onephekhi & kudlalelwa izihambeli ezincane, kanti owesibili unikeza imibhede emibili egcwele usayizi ogcwele. Njengoba uphuma uye endaweni enhle ehlolwe kuvulandi uzothola igumbi lomndeni elikhulu elinesofa ELIKHULU KAKHULU esingalitholela imindeni ethanda ukuhlehla, ukuphumula nokuphumuza umoya.
Okokugcina, kuhlolwe ku-Porch. Ubukhulu obuboniswa kuvulandi yilapho sichitha khona isikhathi sethu esiningi. Ilungele ukujabulela ikhofi ekuseni noma ukubuka izilwane zasendle emahlathini angemva kwendlu. Futhi kulabo abafisa "ukuzitika" sisanda kwengeza umdlalo we-arcade wabantu abangu-2 WAMAHHALA.
Ngaphandle, kunemizila eminingi yezinyamazane ehamba ohlangothini ngalunye lwe-Sunshine Shack. Kukhona ithuba elihle kakhulu lokuthi uthole okuthile.
Sibheke ngabomvu ukuthi uhlale ekhaya lethu kude nasekhaya. Uma i-Sunshine Shack ibhukhiwe, ungahlala ubheka enye indawo "i-Blue Bungalow" eqhele ngekota yemayela!
Sithemba ukuthi uzoyijabulela i-Clearwater Lake kanye ne-Black River njengoba senza.
Andy kanye no Christina
I-HDTV ene- I-Amazon Prime Video, Disney+, Hulu, I-Netflix, I-Roku
4.84 · 43 okushiwo abanye
- I-Sunshine Shack itholakala ku-1/4 imayela ukusuka e-Bluff View Marina nase-Clearwater Lake.
Siyatholakala zikhathi zonke. Unganqikazi ukusithinta ngocingo, umbhalo noma i-imeyili nganoma yimiphi imibuzo onayo.
UAndrew & Christina Ungumbungazi ovelele